Kuthetha ntoni ukuphupha u-Ray Fish? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Kubantu abaninzi, ukuphupha nge-stingray kunokuba ngamava abuhlungu kakhulu, hayi kuba iyintlanzi enobundlobongela, kodwa nangenxa yokuba asazi ukuba imele ntoni kanye kanye.
Ekuqaleni, ukuphupha kule ntlanzi yolwandle kuthetha ukuba uneminqweno ongenakuyeka nangayiphi na indlela, kodwa iinkcukacha zephupha lakho zibaluleke kakhulu ekutolikweni kwalo.
Xa uphupha into, into yokuqala kusasa yiya kwindawo yethu kwaye uze ufumanise malunga neentsingiselo zayo nangayo yonke into enokuthetha ukuba iphupha elo, sinamangenelo apheleleyo ngokuchanekileyo okukunceda ufumane olona ngcebiso lubalulekileyo ebomini bakho.
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha umtya?
2 Iphupha malunga neNtlanzi emnyama eStingray
3 Iphupha Ngeentlanzi eziFileyo zeRay
4 Ndiphupha ukuba ndibambe intlanzi yestingray
5 Iphupha leentlanzi ezininzi ze-stingray
Kuthetha ukuthini ukuphupha umtya?
Ukuphupha ngomtya kuthetha, ekuqaleni, ukuba uneminqweno entliziyweni yakho ongenakuyifeza. Eyona nto ibaluleke kakhulu okwangoku kukuzivavanya ubomi bakho ukuze ufumane ukuba yintoni.
Ukongeza kule ntsingiselo, umbane ukwathetha ubulumko, Oko kukuthi, ukuba uphuphe ngesi silwanyana oko kuthetha ukuba unobulumko obuninzi ebomini bakho.
Ukulungelelanisa zonke izinto ukuze usebenzise obona bulumko bakho. Ungasebenzisa yonke into oyaziyo ukunceda wena, iya kwenza kuphela ubomi bakho bube lula.
Iphupha malunga neNtlanzi emnyama eStingray
Ukuphupha ngomtya omnyama kuthetha ukuba unobunzima obukhulu ekwamkeleni ezinye zezinto ezakha ubuntu bakho. Siyaqonda ukuba oku kunokuba nzima, ngakumbi ukuba ezinye zeempawu zalo ziphikisana noko ucinga.
Ayinamsebenzi nokuba olu phawu luhamba nezinto ezikwenza uzive ungalunganga, ukuba yinto eyinxalenye yobuntu bakho kufuneka uqale ufunde ukujongana nayo kwaye emva koko uqale ukucinga ngayo ngokucacileyo.
Ubunzima obuMnyama bunokuthetha ukuba kuya kufuneka uzinike ulwamkelo ngakumbi, ungabi nzima ngokwakho, ayisiyonto intle leyo kwingqondo yakho.
Iphupha Ngeentlanzi eziFileyo zeRay
Ukuba ephupheni lakho imitha ibifile, ke qalisa ukuqonda ukuba ngaphandle kwamandla akho awuyi kufika apho ufuna ukuba khona. Imitha efileyo ibonisa ukungaphumeleli kwemishini yabo, oku kuya kwenzeka kuphela kwaye abayi kwenza ngokukhawuleza.
Cinga bhetele ngobomi bakho, hlela phambili izinto eziphambili ngokubaluleka, uyeke ukuchitha ixesha kubahlobo bobuxoki okanye kubantu abangafanelekanga nokuba yinkampani yakho. Cinga ukuba lonke ixesha olichithayo kunye nezinto ezingabuyiswanga kuwe zingalahleka kamva.
Eli phupha linokuthetha ukuba kukho abantu abanetyhefu ebomini bakho. Aba bantu bakungqonge ngamehlo amabi kwaye banokwenza ubomi bakho bube nzima nangakumbi.
Gcina ukhumbula ukuba abantu abakungqongileyo bahlala besabelana ngamandla kunye nawe. Ungafuni ukuba kunye nabantu ababi okanye abaneentliziyo ezimbi, akuyi kukunceda nganto.
Ndiphupha ukuba ndibambe intlanzi yestingray
Ukuba uphuphe ukuba uloba i-stingray, oko kuthetha ukuba isibindi sakho siya kukunika uloyiso. Kancinci kancinci uphulukana noloyiko lokwenza into kwaye uhambe uyokuhlala ufuna oko uhlala ukufuna.
Ukuba uyazikhulula, wenza yonke into el mundo Uyayazi into oyiyo, iyakwenza umahluko hayi kubudlelwane bakho kuphela kodwa nakwimpilo yakho yobungcali.
Yeka ukunikela ingqalelo kakhulu kwizinto ezithethwa ngabantu kuwe, kuya kufuneka ukhathazeke kancinci malunga nokuzazi kwakho. Yenza into ocinga ukuba ilungile ebomini bakho, ingcebiso elungileyo yamkelekile, kodwa kuya kufuneka ube ungumnini webali lakho.
Qinisekisa ukuba wenza into ocinga ukuba ilungile kuba abahlobo bakho kunye nosapho bakuxelela ukuba ayingombono olungileyo.
Iphupha leentlanzi ezininzi ze-stingray
Ukuba uphuphe ngesikolo semivumbo, oko kuthetha ukuba awubuxabisi ubulumko bakho. Uzivumela ukuba uhanjiswe sisihlwele kunye nayo yonke into abanye abayicingayo, ukuba ubeka ecaleni oluhlobo lwesidingo sokwamkelwa kubalulekile ebomini bakho ukuba uqhubeke. Zikhulule, khululeka kwaye ucinge ngakumbi malunga nento oyilindeleyo ebomini bakho.
Sebenzisa into oyazi kakuhle kwaye uqiniseke ukuba bonke abantu bayakuhlonipha ngolwazi lwakho, ngokungathandabuzekiyo lolona phawu lwakho lubalaseleyo. Ngalo lonke ixesha uphupha into ongayaziyo intsingiselo yalo, liphande malunga nalo ukuze wazi ukuba leliphi ilizwe lamaphupha ekufuneka likuxelele ngalo.
Iingcebiso ezinikwa ngamaphupha ngaphandle kwamathandabuzo zezona zibaluleke kakhulu. Sebenzisa olu hlobo lomyalezo kwinzuzo yakho ukufezekisa impumelelo.
Ucinga ntoni ngentsingiselo yokuphupha malunga nestingray? Sitshele kancinci ngephupha lakho, singathanda ukuva ngalo!